Kijibdu OPDO Lema Megersaa Afaan damaa, mee dhagefadhaa! – Kichuu
Kijibdu OPDO Lema Megersaa Afaan damaa, mee dhagefadhaa!
Kijibdu OPDO Lema Megersaa Afaan damaa, mee waan jedhu dhagefadhaa.
Kuni bayy’ee nama gadhisisaa garruu waalegayii kana gubati OPDO kabbiinotafi daldalotaa Walsoo an’argamee. Lema Megersaa gorsaa Aby Teshayee irraa egaa fudhatee boda amaa gadhii bahe soba isaa dabarsaa jirraa. waan Lema jecha jirruu
Tigrayti Konkolataan gubamee beekaa
Biyaa Amarati konkolataan gubatee beekaa jechunsa an nama gadhisissu dha. An nadhibuu Tigray qabeenyaa Oromo samtee biyaa ishi akaa Auropati gudiifatee wajiin compari gochu isaa walalummaa dha Oromo garbuma jala eso jirrtuu akkanati odeesunsaa an nama dhiibuu dha. Oromon waga 27 tokkole dandiin an qabeenya Oromo an itin samammuu malee saba gabba demee daldalata jirruf tokolee hjn’ojjatamnee, kana beekaa garu Gibiraa gidiraa wayanee kafalaa jetee an akka saree maretee oli gadhi katu OPDO ergmatuu Tigrayti.
Dhugaan jirru garu Lema Megersaa Afaan isaa damaa diibatee maqaa Misomatin, Economy Revolutionii, Dhakaa sobatin an wayanee ango irraa tursisuuf alkanif guyyaa an ojjatuu dha malee dhalaga waan tokko Lema Negersaa Oromo dhaf ojjotaa jetaani yeroo kesaan hinfixiinaa.
Lema Megersaa eso beekee Sabni ojjatee Gibiraa diiduu qaba malee akamitii suuki cuufaa jedhee an-nama sobu dha, anjiirru garu agazinifi OPDOn waraa Gibiraa hin’kafalee mana hidhatii Oromiyaa eddo tokko tokkon guraa esso jirtuu yaa waqayoo maale jeena ? kuni an nati fakkatuu Lema Megersaa wayanee irraa gorsaa fudhatee amaas an Oromo gowomsuu yaaluu dha Yaa Oromo dammaaqi.
Gorsaa Lema Afaan damaa, Soba nama kana Sabni akkaa tokkolee hinfudhanee
Qabsoo Oromo ciimee itifufufaa !
Via Biqilaa Biyyaa
J/A/Umar Umar Suleyman . Akkas taanaan dubbattiin,biyyuma keenna ree gubbatti, wanni galee haa galu,kuma dhiisi dunbulloo siin kafalu. Jedhe ormoon barana. Hintuqina waatu bada ittii dhiisa jarana hin baddani barana.
Lema Megersaa Qabsoo Oromo dhamsu dhaf alkanif guyyaa wayanee ..
In "Afaan Oromoo"
OPDOn hin’sobdi wa’ee Gadaa Busi kana: Gadaa bus= Selam bus!!
Kol. Gammachuu hidhame!Hidhaan hoggantootafi deeggartoota ABO akkuma itti fufetti jira.
Categories: Afaan Oromoo